प्रदेशको प्राथमिकता फिल्म सिटी- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
प्रदेशको प्राथमिकता फिल्म सिटी
असार २९, २०७६ राजेन्द्र मानन्धर
(दोलखा) — अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरी (फिल्म सिटी) लाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि प्रमुख आयोजनाको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष दुई करोड रकम विनियोजन नै गरेको छ ।
संघीय सरकारले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी बनाउने योजनाका लागि हालसम्म १७ करोड खर्च गरिसकेको भए पनि यो वर्ष खासै प्राथमिकतामा राखेन ।
मुलुककै पहिलो र ठूलो मनोरञ्जन क्षेत्रको परियोजनाका रूपमा चलचित्र विकास बोर्डले यसअघि नै १५ सय रोपनीमा फैलिने चलचित्र नगरीको शिलान्यास पनि गरिसकेको छ । १२ करोड ४५ लाख लागतमा दुई लेनको सडक निर्माण पनि गरिसकेको छ ।
‘एक करोड लागतमा पानी र बिजुली आयोजना स्थलमा पुर्‍याउने कार्यसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ,’ फिल्म सिटीका अभियन्तामध्ये एक कलाकार मदनदास श्रेष्ठले भने, ‘तर, किन हो कुन्नि यसपटक संघीय सरकारले कम प्राथमिकतामा राख्यो ।’ तैपनि चलचित्र विकास बोर्डले सिमेका विम जेभीद्वारा तयार पारिएको दोलखा फिल्मसिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हालै सार्वजनिक गरेको छ । संघीय सरकारको करिब एक करोड खर्चमा तयार भएको विस्तृत प्रतिवेदनमा दोलखा फिल्म सिटीका लागि पाँच अर्ब लाग्ने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चलचित्र लगानीकर्ताहरूको आकर्षण र चापका आधारमा लागत बढेर १५ अर्ब पुग्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको अनुमान छ । प्रतिवेदनमा तारे होटल, ताल, इन्डोर आउडोर स्टुडियो, प्रोडक्सन युनिट, प्रशासनिक भवन, जातजातिका थिमाटिक भिलेज, हेलिप्याड लगायतका संरचना बन्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि बजेटको कोणबाट भने संघीय सरकारले निष्क्रियता जनाएको छ । ३ प्रदेश सरकारले पनि फिल्म सिटीलाई सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र भीमेश्वर नगरपालिकाको आयोजना भनेर बजेट जम्मा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ३ प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले उक्त परियोजना संघीय सरकारले नै अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘संघीय सरकारले हात झिकेको अवस्थामा प्रदेशले परियोजनालाई निरन्तरता दिन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो,’ मन्त्री नेपालले भने । फिल्म सिटीका लागि सुरुका दिनदेखि लगातार क्रियाशील मदनदासले पनि संघीय सरकारले नै प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित : असार २९, २०७६ १०:३९
(ललितपुर) — कलाकार टेकबीर मुखिया भन्नासाथै सयौं साहित्यिक पुस्तकको आवरण र भित्री रेखाचित्रको अर्थपूर्ण हुलिया आँखामा उत्रिहाल्छ । करिब आधा शताब्दी अघिदेखि छाएको यो एकछत्र कला र कलाकारको नाम ‘मू’ केही वर्षयता अलिक ओझेलमा बसेको देखिन्छ ।
इतिहासका जोरगणेश प्रेस, रत्न पुस्तक भण्डार, साझा प्रकाशन र अरू निजी तहका पुस्तकहरूमा गरेर ६ हजारभन्दा बढी रेखाचित्र कोर्ने मुखियाको अहिलेको व्यस्तता भने भिन्न छ, ध्याउन्न अलग छ ।
भैंसेपाटी हाइटभित्रको घरमा टेकबीर मुखियाको दैनिकी सुरु हुन्छ– बिहान ४ बजेबाट । ‘बेलुका आँटा भिजाएर राख्छु । बिहानै रोटी पोल्छु । अनि ससानो टुक्रा गरेर परेवालाई दिन्छु,’ टेकवीरको खुसीको बिहानी यसरी सुरु हुन्छ । अनि, ढुकुर, काग, भँगेराको पालो सुरु हुन्छ । भँगेरा र ढुकुरका लागि चामल दिने बेग्लै कुनो छ, बगैँंचामा । टोलभरका १०/१२ कुकुरहरू बिहानै घरको गेटमा आएर बोलाउन थालिहाल्छन् । अघिल्लो दिन नजिकै मासु पसलबाट ल्याएको चिकेन लेग्स/हेड चामलमा मिसाएर पकाइएको हुन्छ, त्यही कुकुरहरूको खान्की हो । यति गर्दा कागको गोलो लागेको हुन्छ, घरको छतभरि । तिनलाई पनि खान्की जुटाउनै पर्‍यो ।
‘यो धर्तीमा सबैको अधिकार उत्तिकै छ, काग र भँगेराको पनि उत्तिकै हक छ । कुकुर, बिरालाको पनि उत्तिकै हक छ,’ मुखिया भन्छन्, ‘मलाई एकाबिहानैदेखि यी चराचुरुंगी, कुकुर बिरालाले मुखिया..ए मुखिया भनेर बोलाउन थालेजस्तै भान पर्छ ।’ नियमित योगा अभ्यास, मौलिक आयुर्वेदिक उपचार पद्धति र सात्विक खानपिन मुखियाको विशेषता हो ।
उमेरमा ८६ वर्ष उकालो लागेका मुखियाले श्रीमती शुक्रासँग पनि सर्त कबुल गरेका रहेछन्– घरकी श्रीमती र बाहिरी चराचरलाई माया बराबर । पढाइका क्रममा छोरो अमेरिका र छोरी नर्वेमा रहेकाले मुखिया दम्पतीको मायाको संसार अझ भिन्न बनेको हो ।
‘अहिले टाइम निकाल्नै मुस्किल छ । आफ्नो लुगा आफैं धुन्छु, भाडा माझ्छु । फूलबिरुवामा मल–पानी हाल्छु,’ मुखिया भन्छन्, ‘बाँकी समय चराचुरुंगी, कुकुर बिराला छँदै छन् । अझ भँगेरा र परेवाका लागि दिनको ३ टाइम चारो दिनुपर्ने हुन्छ । रेखाचित्र, कला सृजनाका काम आइरहे पनि समय दिनै मुस्किल छ । ‘भर्खरै यलम्बरको एउटा मुहारचित्र तयार गरिदिएको छु,’ मुखियाले सुनाए, ‘तर, काम दिनेहरू आफैं बेपत्ता भएका छन् ।’ अस्ति भर्खरै आदिकवि भानुभक्तको एउटा मुहारचित्र उनले देखेका रहेछन्, कुनै लिम्बूवान तन्नेरीको चेहराजस्तो । ‘यहाँ जसले जे गरेपनि हुन्छ, कुरा बुझ्ने अथवा सुन्नेहरू निकै कम छन्,’ मुखियालाई लाग्न थालेको छ ।
मुखियाले पञ्चायतकालीन संसद् होस् अथवा गणतान्त्रिक संसद्, दुवै अवधिका सांसदले लगाउने प्रतीकचिहृन बनाएका छन् । साझा प्रकाशनमा उनी २०२२ सालदेखि झन्डै ४ दशक लगातार सम्बद्ध रहे । मुनामदन, बसाइँ, गौरीजस्ता कृतिको ‘मु. आर्ट इमेज’ धेरैका आँखामा गडेकै छ ।
‘मैले सेवानिवृत्त हुँदा मुस्किलले २० हजार रुपैयाँ पाएँ । त्यहाँ अहिले पेपर–फोल्ड गर्ने कर्मचारीले पनि १२/१५ लाख रुपैयाँ निवृत्तिभरण भत्ता मागिरहेका छन् रे,’ समय अन्तरमा आएका ‘भिन्न’ कुरा सम्झिरहेका छन् मुखिया । पोट्रेट वा अन्य चित्रमा ‘तैल रंग’ मा रमाउने मुखियाले पुस्तक आवरणमा भने पानी–रंगमा खेलेका छन् । ‘मेरा लागि गरेको काममा ‘मुनामदन’ को आवरण सधैं सम्झिरहन्छु, त्यो चित्रमा आफैंमा आप्रवासन र वियोगको एउटा दुःखान्त कथा जोडिएको छ,’
मुखिया भन्छन् ।
दार्जिलिङमा जन्मेहुर्केका र कोलकातामा पढाइ अघि बढाएका मुखिया कला सृजनाको फराकिलो दुनियाँ खोज्दै सन् १९६५ मा नेपाल आएका थिए । अग्रज कलाकार लैनसिंह वाङ्देलसहितको साथ र संगतले पनि मुखिया बढी मानवीय र व्यावहारिक बनेका हुन् । ‘लङ्गडाको साथी’, ‘मुनामदन’ जस्ता पुस्तकको आवरण कोर्दा कथावस्तु पढेरै मुखिया एक/दुई दिन घोरिन्थे, कहिले रुन्थे पनि । अनि मात्रै कुची लिएर चित्र खाका उतार्न बस्थे ।
‘तिनै लेखक र पुस्तकको संगतले पनि हुन सक्छ, म कुकुर, बिराला, चराचुरुंगीलाई अन्तरआत्माले माया गर्छु,’ मुखिया भन्छन्, ‘हाम्रो पो आवाज छ त, यी पशुपक्षीको के छ र ? को छ र ? भन्ने लाग्छ ।’
प्रकाशित : असार २९, २०७६ १०:३७
सदाबहार छैनन् देउसीभैली
स्वी छिङ सुटुक्क पोखरा
घलेगाउँ डोर्‍याउने गीत
फिल्ममा हिजो आजका कुरा